English for Business Life (Elementary) | Myanmar Academy - Online Education, Learning, Courses, Platform
Created by Sayar David Last updated Mon, 31-Aug-2020 English
10 Lessons 01:58:57 Hours
9 Lessons 01:53:01 Hours
Unit 1 - About You 00:07:27
Unit2- About Your Job 00:08:09
Unit3- About where you work 00:10:58
Unit4- Your Business Activities 00:13:16
Unit5- The location of your company 00:12:00
Unit6- The Layout of your company 00:15:24
Unit7- Meeting and welcoming 00:16:46
Unit 8 - The first two minutes 00:15:53
Unit9- Partings and Thanks 00:13:08
Suggestion - How to learn this course? 00:05:56
Voice for Listen
You will need an average level of intelligence, an Elementary level of English.
အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံရှိပြီး သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်သူဖြစ်ရမည်။
This course deals with everyday matters such as vocabulary, interactive communication skills and understanding business activities.
သင်ခန်းစာတိုင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအသုံးဝင်မည့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ၊ အပြန်အလှန်ပြောဆိုနိုင်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ နေ့စဉ်ဘ၀ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို သိရှိနားလည်လာခြင်းများ ရရှိလာပါ လိမ့်မည်။
Sayar David's Brief Biography
ဆရာဒေးဗစ်ကို ၁၉၇၉ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းအထူးပြု ဘာသာရပ် B.A ( History ) ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပြောဆို ဆောင်ရွက်ရသော ကုမ္ပဏီကြီးများတွင်
အနှစ် ၂၀ ကျော်တိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်အတွင်း ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် IT, Sales & Marketing, Business English, Personal Grooming, Motivation အစရှိသည့် In House Training များကိုလည်း သင်ကြားပြသ ပို့ချ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ဆရာဒေးဗစ်သည် သူကိုယ်တိုင် သင်ယူလေ့လာ လက်တွေ့ သင်ကြား ပြသခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ များကို အခြေခံကာ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးသို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင် နေသူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်း သူများ နှင့် ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ထားသော်လည်း မိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး တိုးတက်ချင်လိုသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရဌာနမှ အကြီးအကဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးမှ ဆရာ ဆရာမ များ၊ ဆရာဝန်များ၊ ဆရာတော်များ၊ သီလရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ မော်ဒယ်များ၊ အဆိုတော်များ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ သင်္ဘောသားများကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် သင်ကြားမှုပုံစံများပြောင်းလဲကာ သင်ကြားပိုချပေး လျက်ရှိပါသည်။
ဆရာဒေးဗစ်သည် Htoo Hospitality, City Mart, S&P Distribution, Aung Gyi Group of Companies, PWE365, MESI, Htut Digital Media, CDG, Ruby Roma, MFA, Welco Milk, Taunggyi Mauk Mae, Sanofi, Strong Steel Structure, Delux Spa, DPF, SBMA, Myanmars.Net ကုမ္ပဏီများတွင် cooperative training များသင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး ပို့ချနှေဆဲလည်း ဖြစ်ပါသည်။
online learning platform မှလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ Internet Access ရှိရုံဖြင့် 24/7 အချိန်နေရာမရွေး အလွယ်တကူ လေ့လာသင်ယူနိုင်အောင် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Sayar David @ U Myo Min Thant
HP: 0945000 7907
“ LIFE IS SCHOOL!
“ နေ့စဉ်ဘဝကျောင်းတော်မှာ သင်ယူလေ့လာပါ!!! ”
Ks 10000 Ks 100000
01:58:57 Hours On demand videos
Course preview:English for Business Life (Elementary)